သီးသန့်လုံခြုံရေးမူဝါဒ - TutorialCup
tutorialcup.com ("ဝက်ဘ်ဆိုက်") သည် Ezoic ဟုခေါ်သော third party နည်းပညာကိုအသုံးပြုသည်။
Ezoic သည်သင်၏ privacy ကိုကာကွယ်ရန်ကတိကဝတ်ပြုထားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အထွေထွေဒေတာကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးစည်းမျဉ်း (GDPR) (Regulation (EU) 2016/679) အရကျွန်ုပ်တို့တရားဝင်ကောက်ယူသည့်သတင်းအချက်အလက်များကိုသာအသုံးပြုမည်။
Ezoic ၏အဓိကလုပ်ဆောင်ချက်များမှာ -
ကျွန်ုပ်တို့၏သီးသန့်တည်ရှိမှုမူဝါဒသည် Ezoic Inc. , Ezoic Limited နှင့်ဤဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုလွှမ်းခြုံထားသည်။
မြောက်ပိုင်းဒီဇိုင်းစင်တာ၊ Abbott's Hill, Gateshead, NE8 3DF United Kingdom
ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများနှင့်ဆက်စပ်သောပံ့ပိုးမှုများပေးရန် Ezoic သည်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုဥရောပသမဂ္ဂပြင်ပသို့လွှဲပြောင်းရန်လိုအပ်သည်။ ထိုကဲ့သို့သောအခြေအနေမျိုးတွင်၊ အီးယူနေထိုင်သူများအတွက်ဤအချက်အလက်များအတွက်ဒေတာထိန်းချုပ်သူမှာ Ezoic Inc. ဖြစ်ပြီးသူ၏မှတ်ပုံတင်ရုံးများမှာ ၆၀၂၃၊ Carlsbad, United States ။ အချက်အလက်အပြောင်းအလဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့တောင်းဆိုမှုအားလုံးဟာလိပ်စာတွေဖြစ်နိုင်တယ် [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]
အကယ်၍ သင်သည်ထိုကဲ့သို့သောစုဆောင်းမှုကိုသဘောမတူပါကသင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းမပြုဘဲဤ ၀ က်ဘ်ဆိုက်ကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သည်။
Ezoic သည်လူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ချင်းနှင့်အချက်အလက်များကိုဤ ၀ ဘ်ဆိုဒ်သို့မှတ်တမ်းတင်သည်။ Ezoic သည်ဤ ၀ က်ဘ်ဆိုက်၏ကန့်သတ်ကိုယ်စားလှယ် (နှင့်အီးယူအခြေအနေတွင်ဒေတာထိန်းချုပ်သူ) ဖြစ်သည်။ အင်တာနက်ဒေတာနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သော ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးသည်။ Ezoic သည်ဤအချက်အလက်များကို သုံး၍ ၎င်း၏ ၀ န်ဆောင်မှုကိုတိုးတက်စေရန်သို့မဟုတ်အခြား ၀ န်ဆောင်မှုများကိုဖွင့်နိုင်သည် (ဥပမာ၊ websites ည့်သည်အသွားအလာမှတ်တမ်းများသို့မဟုတ်အခြားဝက်ဘ်ဆိုက်များတိုးတက်ကောင်းမွန်စေရန် ၀ န်ဆောင်မှုမှတစ်ဆင့်တင်ထားသောအချက်အလက်များကိုသုံးခြင်း) ။
Ezoic သည် GDPR (ဥပမာ IP လိပ်စာနှင့် cookie ထဲမှထူးခြားသောအိုင်ဒီကဲ့သို့) တွင်သတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်းကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုစာရင်းဇယား၊ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုနှင့်ကိုယ်ပိုင်ပြုလုပ်ရန်အတွက်သင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့ collect ည့်သည်များနှင့်စုဆောင်းနိုင်သည်။ ထို့အပြင် Ezoic သည်အချက်အလက်စုဆောင်းခြင်းနှင့်သိမ်းဆည်းခြင်းနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုနှင့်ကြော်ငြာ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုထောက်ပံ့ရန်အတွက်များစွာသောတတိယပါတီများနှင့်အလုပ်လုပ်သည်။
ရည်ရွယ်ချက် / လုပ်ဆောင်ချက် ဒေတာအမျိုးအစား (များ) အပြောင်းအလဲနဲ့များအတွက်တရားဝင်အခြေခံ
သင်၏သတင်းအချက်အလက်ကသင့်အားဤ ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်ပိုမိုကောင်းမွန်သော၊ အကျိုးရှိရှိအတွေ့အကြုံများကိုသင်သို့မဟုတ်အခြားသူများကဤသို့မဟုတ်အခြားဝက်ဘ်ဆိုက်များရှိအကြောင်းအရာနှင့်ကြော်ငြာများကိုမည်သို့တုန့်ပြန်မည်ကိုစိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ရန်ကူညီပေးသည်။
သင်၏သတင်းအချက်အလက်ကသင့်အားပြသသည့်ကြော်ငြာ၊ နေရာချထားမှု၊ အရွယ်အစား၊ အချိန်နှင့်အရေအတွက်ကိုပိုကောင်းအောင်ကူညီပါသည်။ ဤ ၀ က်ဘ်ဆိုက်ပိုင်ရှင်မှ ၀ င်ငွေရရှိစေရန်နှင့်သင်၏အတွေ့အကြုံအပေါ်ကြော်ငြာများ၏အနှောင့်အယှက်ကိုလျော့နည်းစေသည့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချရန်ကျွန်ုပ်တို့အားကူညီသည်။
သင်၏သတင်းအချက်အလက်သည်ကျွန်ုပ်တို့ site နှင့်ပတ်သက်သောအမျိုးမျိုးသောစွမ်းဆောင်ရည်ဆိုင်ရာမက်ထရစ်များကိုတိုင်းတာရန်ကူညီသည်။ ဥပမာကျွန်ုပ်တို့သည် site ၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးတက်စေရန်။
သင်နှင့်အခြားဝက်ဘ်ဆိုက်များ၏လည်ပတ်မှုတိုးတက်စေရန်သင်နှင့်ပတ်သက်သောကျွန်ုပ်တို့စုဆောင်းထားသောအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့ဆောင်ရွက်ပါမည်။ ဤအချက်အလက်သည်မည်သည့်အကြောင်းအရာကိုပြသမည်၊ မည်ကဲ့သို့ပုံစံချသင့်သည်၊ ကြော်ငြာအရေအတွက်၊ အရွယ်အစားနှင့်နေရာချထားမှုနှင့်တစ် ဦး ချင်းစီကိုမည်သို့ပေးပို့သင့်သည်စသည်တို့ကိုဆုံးဖြတ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အားကူညီသည်။ ဤအချက်အလက်များသည်စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်အစီရင်ခံမှုကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရာတွင်အသုံးပြုသည်။
ဤဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့်ဖန်တီးထားသောကျွန်ုပ်တို့၏သတင်းအချက်အလက် (“ လျှောက်လွှာမှတ်တမ်းဒေတာ”) ကျွန်ုပ်တို့၏ဆာဗာများသည်အလိုအလျောက်မှတ်တမ်းတင်သည်။ Application Log Data တွင်သင်၏အိုင်ပီလိပ်စာ၊ ဘရောက်ဇာအမျိုးအစား၊ လည်ပတ်မှုစနစ်၊ ရည်ညွှန်းထားသောဝက်ဘ်စာမျက်နှာ၊ လာရောက်ကြည့်ရှုသည့်စာမျက်နှာများ၊ တည်နေရာ၊ သင်၏မိုဘိုင်းလေယာဉ်တင်သင်္ဘော၊ စက်ပစ္စည်းနှင့်လျှောက်လွှာအိုင်ဒီများ၊ ရှာဖွေရေးဝေါဟာရများနှင့်ကွတ်ကီးသတင်းအချက်အလက်များတို့ပါဝင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုရှာဖွေဖော်ထုတ်ရန်နှင့်တိုးတက်စေရန်ဤအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုသည်။ အပိုင်း (ဒေတာသိမ်းဆည်းခြင်း) တွင်ဖော်ပြထားသည် မှလွဲ၍ ကျွန်ုပ်တို့သည် ၄၈ လကြာပြီးနောက် Application Log Data ကိုဖျက်ပစ်မည်သို့မဟုတ်သင်၏အကောင့်အမှတ်အသား၊ သင်၏အသုံးပြုသူအမည်၊ IP လိပ်စာအပြည့်အစုံသို့မဟုတ်အီးမေးလ်လိပ်စာကိုဖယ်ရှားလိမ့်မည်။
ကျွန်ုပ်တို့စုဆောင်းထားသည့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုအထက်ပါ“ အချက်အလက်နှင့်သဘောတူညီမှုကိုဆောင်ရွက်ခြင်း” အပိုင်း (သို့) Ezoic လိုက်နာရန်တာဝန်ရှိသည့်ဥပဒေသို့မဟုတ်စည်းမျဉ်းများကသတ်မှတ်ထားသောကာလအတွက်ဖော်ပြထားသောရည်ရွယ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်လိုအပ်သည်ထက်မပိုစေရန်ထိန်းသိမ်းထားသည်။ SSL အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်၊ ငွေပေးချေခြင်းနှင့်ငွေတောင်းခံခြင်းကဲ့သို့သော ၀ န်ဆောင်မှုအမျိုးအစားအချို့ကိုစစ်ဆေးရန်အတွက်အသုံးပြုသောကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုကုန်ပစ္စည်းသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုအမျိုးအစားပေါ် မူတည်၍ အနည်းဆုံး ၅ နှစ်ကြာအောင်ထိန်းသိမ်းထားပြီးရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသို့မဟုတ်အီလက်ထရောနစ်ပုံစံဖြင့်ထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည်။ သင်၏အချက်အလက်များကိုဖျက်သိမ်းခြင်းသို့မဟုတ်ဖျက်သိမ်းခြင်းကိုသင်တောင်းဆိုလျှင်ပင်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့၏တရားဝင်စီးပွားရေးအကျိုးစီးပွားသို့မဟုတ်စာချုပ်ပါ ၀ င်မှုဆိုင်ရာတာ ၀ န်များအတွက်လိုအပ်သည့်အတိုင်းအတာအထိလိုအပ်သည်အထိထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည်။ ထိန်းသိမ်းခြင်းကာလပြီးဆုံးသွားသောအခါ Ezoic သည်အရှုံး၊ ခိုးမှု၊ အလွဲသုံးစားမှုသို့မဟုတ်ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲဝင်ရောက်ခြင်းကိုကာကွယ်ရန်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုလုံလုံခြုံခြုံဖယ်ထုတ်ခြင်းသို့မဟုတ်အမည်ဝှက်ခြင်း။
လျှို့ဝှက်ထား / လုံခြုံရေး
ကျွန်ုပ်တို့ထိန်းချုပ်မှုအောက်ရှိကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုကာကွယ်ရန်လုံခြုံရေးပေါ်လစီများ၊ စည်းမျဉ်းများနှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာအစီအမံများကိုအကောင်အထည်ဖော်ပြီးဖြစ်သည် - ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲဝင်ရောက်ခွင့်ကိုမသင့်လျော်စွာအသုံးပြုခြင်းသို့မဟုတ်ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲပြုပြင်ခြင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ထမ်းများနှင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုပြုပြင်ခြင်းနှင့်ဆက်စပ်နေသောအချက်အလက်များနှင့်လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်သူများသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ visitors ည့်သည်များ၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များ၏လျှို့ဝှက်ချက်ကိုလေးစားရန်တာဝန်ရှိသည်။ သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုဥပဒေသို့မဟုတ်အခြားစည်းမျဉ်းများကလိုအပ်သည် မှလွဲ၍ သင်၏ပြည်နယ်အချက်အလက်များကိုပြည်နယ်အဖွဲ့အစည်းများနှင့်အာဏာပိုင်များသို့ထုတ်ဖော်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ
အချက်အလက် Access & ဖျက်ခြင်း
သင့်အကြောင်းကျွန်ုပ်တို့စုဆောင်းထားသောသတင်းအချက်အလက်များကိုကြည့်ရှုပိုင်ခွင့်ရှိပြီးကျွန်ုပ်တို့ရှိသည့်မည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုမဆိုဖျက်သိမ်းရန်တောင်းဆိုပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ သင်အသုံးပြုနိုင်သည် ဒီဒေတာကိုရှာဖွေ tool ကို ဤအလုပ်ရပ်များဖြည့်စွက်ရန်။
wordpress_test_cookie လိုအပ်သော သင် login စာမျက်နှာသို့သွားသောအခါ WordPress ကဒီ cookie ကိုသတ်မှတ်သည်။ သင်၏ဝဘ်ဘရောက်ဇာကိုခွင့်ပြုရန်သတ်မှတ်ထားခြင်းရှိမရှိစစ်ဆေးရန် cookie ကိုအသုံးပြုသည်။
__utmt_e လိုအပ်သော ဆာဗာသို့တောင်းဆိုမှုများ၏မြန်နှုန်းကိုအရှိန်မြှင့်ရန်အသုံးပြုခဲ့သည်။
__cfduid လိုအပ်သော ယုံကြည်စိတ်ချရသော web traffic ကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ရန်အကြောင်းအရာကွန်ယက် Cloudflare မှအသုံးပြုသည်။
__utmt_f လိုအပ်သော ဆာဗာသို့တောင်းဆိုမှုများ၏မြန်နှုန်းကိုအရှိန်မြှင့်ရန်အသုံးပြုခဲ့သည်။
မင်္ဂလာပါ လိုအပ်သော ကွတ်ကီးခွင့်ပြုချက်ပေးသည့် dialog ပိတ်ခြင်းကိုခြေရာခံသည်။
ez_pub_site လိုအပ်သော Ezoic ၏သွင်ပြင်လက္ခဏာများကိုဖွင့်ထားသည့်ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုသာသရုပ်ပြရန်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုနှင့်ကိုယ်ပိုင်ကုမ္ပဏီ Ezoic မှအသုံးပြုသည်။
ezCMPCookieConsent လိုအပ်သော အသုံးပြုသူတစ် ဦး က cookies များကိုခွင့်ပြုသည့်အခါခြေရာခံရန်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုနှင့်ကိုယ်ပိုင်ကုမ္ပဏီ Ezoic မှအသုံးပြုသည်။
ez_rdr_count လိုအပ်သော ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းများကိုခြေရာခံရန်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုနှင့်ကိုယ်ပိုင်ကုမ္ပဏီ Ezoic မှအသုံးပြုသည်
ez_rdr လိုအပ်သော ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းများကိုခြေရာခံရန်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုနှင့်ကိုယ်ပိုင်ကုမ္ပဏီ Ezoic မှအသုံးပြုသည်။
PHPSESSID လိုအပ်သော စာမျက်နှာများကို ဖြတ်၍ ပြည်နယ်များကိုထိန်းသိမ်းရန်အသုံးပြုသောထူးခြားသောအမှတ်အသား။
cf_use_ob လိုအပ်သော Content Delivery ကွန်ယက်၊ Cloudflare မှ အသုံးပြု၍ လိမ်လည်မှုမှကာကွယ်ရန်နှင့်ဝဘ်ဆိုက်များမြန်ဆန်စေရန်။
cf_ob_info လိုအပ်သော Content Delivery ကွန်ယက်၊ Cloudflare မှ အသုံးပြု၍ လိမ်လည်မှုမှကာကွယ်ရန်နှင့်ဝဘ်ဆိုက်များမြန်ဆန်စေရန်။
session_depth လိုအပ်သော ဤ site ရှိ session တစ်ခုတွင်သင်ကြည့်ရှုသည့်စာမျက်နှာအရေအတွက်ကိုခြေရာခံသည်။
ez_view_original_only preferences ကို Ezoic ၏သွင်ပြင်လက္ခဏာများမပါဘဲမူလဆိုဒ်ကိုပြသရန်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုနှင့်ကိုယ်ပိုင်ကုမ္ပဏီ Ezoic မှအသုံးပြုသည်။ 525600 မိ
ez_view_optimized_only preferences ကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုနှင့်စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုပြုလုပ်သောကုမ္ပဏီ Ezoic မှအသုံးပြုသော Ezoic site ၏အင်္ဂါရပ်များကိုဖော်ပြပေးသည်။
ez_view_optimized_only preferences ကို Ezoic ၏သွင်ပြင်လက္ခဏာများမပါဘဲမူလဆိုဒ်ကိုပြသရန်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုနှင့်ကိုယ်ပိုင်ကုမ္ပဏီ Ezoic မှအသုံးပြုသည်။
speed_no_process preferences ကို ဤအသုံးပြုသူအတွက် site speed features များကိုပိတ်ထားရန်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုနှင့်ကိုယ်ပိုင်ကုမ္ပဏီ Ezoic မှအသုံးပြုသည်။
sitespeed_preview preferences ကို ဤအသုံးပြုသူအား site အမြန်နှုန်းအင်္ဂါရပ်အချို့ကိုကြိုတင်ကြည့်ရှုရန်အတွက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုနှင့်ကိုယ်ပိုင်ကုမ္ပဏီ Ezoic မှအသုံးပြုသည်။
ez_ad_position_version preferences ကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုနှင့်စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုပြုလုပ်သောကုမ္ပဏီ Ezoic မှဤအသုံးပြုသူအတွက် Ad Tester ထုတ်ကုန်ကိုအသုံးပြုသည်ဟုတ်မဟုတ်ဆုံးဖြတ်ရန်အသုံးပြုသူကိုစမ်းသပ်သူတိုးချဲ့ခြင်းမှအသုံးပြုသည်။
ezpicker_showall preferences ကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုနှင့်စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုပြုလုပ်သောကုမ္ပဏီ Ezoic မှအသုံးပြုသောနေရာအားလုံးကိုပြသရန် ezpicker app ကိုပြောပြရန်အသုံးပြုသည်။
ezpicker_nocache preferences ကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုနှင့်ကိုယ်ပိုင်ကုမ္ပဏီ Ezoic မှအသုံးပြုသော ezpicker app အား cache ကိုမသုံးပဲ run ရန်အသုံးပြုသည်။
ပိုလန် preferences ကို ezpicker ကိုဖွင့်ရန်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုနှင့်ကိုယ်ပိုင်ပြုလုပ်သည့်ကုမ္ပဏီ Ezoic မှအသုံးပြုသည်
SL_wptGlobTipTmp preferences ကို
SL_GWPT_Show_Hide_tmp preferences ကို
GED_PLAYLIST_ACTIVITY preferences ကို embed လုပ်ထားသော YoutTube ဗီဒီယိုနှင့်သက်ဆိုင်သောလှုပ်ရှားမှုများကိုခြေရာခံသည်
__qca စာရင်းအင်း အသုံးပြုသူ၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်သို့သွားသောလည်ပတ်မှုအရေအတွက်၊ ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်ပျမ်းမျှအချိန်နှင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်အကြောင်းအရာများကိုအကောင်းဘက်သို့တင်ပြရန်အစီရင်ခံစာများထုတ်လုပ်ရန်ရည်ရွယ်သည့်စာမျက်နှာများကဲ့သို့အမည်မသိအချက်အလက်များကိုစုဆောင်းသည်။
Ezds စာရင်းအင်း သင်၏အတွေ့အကြုံကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်ရန်နှင့်အကြောင်းအရာနှင့်ကိုက်ညီစေရန်အတွက်သင့်မျက်နှာပြင်၏ pixel အရွယ်ကိုသိမ်းဆည်းရန်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုနှင့်ကိုယ်ပိုင်ကုမ္ပဏီ Ezoic မှအသုံးပြုသည်။
__utmc စာရင်းအင်း အသုံးပြုသူ ၀ က်ဘ်ဆိုက်မှထွက်ခွာမည့်အချိန်အတိအကျကိုမှတ်သားသည်။ ၀ ဘ်ဆိုဒ်လည်ပတ်မှု၏ကြာချိန်ကိုတွက်ချက်ရန် Google Analytics မှအသုံးပြုသည်။
ezouspva စာရင်းအင်း အသုံးပြုသူတစ်ချိန်ချိန်မည်မျှစာမျက်နှာများကြည့်ရှုသည်ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုနှင့်ကိုယ်ပိုင်ကုမ္ပဏီ Ezoic မှအသုံးပြုသည်။
ezosuigeneris စာရင်းအင်း သင်၏အတွေ့အကြုံကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ရန်အတွက်အင်တာနက်ပေါ်ရှိကွဲပြားခြားနားသော ၀ က်ဘ်ဆိုက်များတွင်သင့်အားထူးခြားစွာခွဲခြားသတ်မှတ်ရန်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုနှင့်ကိုယ်ပိုင်ကုမ္ပဏီ Ezoic မှအသုံးပြုသည်။
__utmz စာရင်းအင်း အသုံးပြုသူမည်သည့်နေရာမှလာသည်၊ မည်သည့်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ကိုအသုံးပြုသည်၊ မည်သည့် link ကိုနှိပ်သည်နှင့်မည်သည့်ရှာဖွေရေးဝေါဟာရကိုအသုံးပြုသည်စသည့်အချက်အလက်များကိုစုဆောင်းသည်။ Google Analytics မှအသုံးပြုသည်။
__utmb စာရင်းအင်း အသုံးပြုသူ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်သို့ ၀ င်ရောက်သည့်အချိန်အတိအကျကိုသတ်မှတ်ထားသောအချိန်ဇယားကိုမှတ်ပုံတင်သည်။ ၀ ဘ်ဆိုဒ်လည်ပတ်မှု၏ကြာချိန်ကိုတွက်ချက်ရန် Google Analytics မှအသုံးပြုသည်။
ezepvv စာရင်းအင်း ဤအသုံးပြုသူကြည့်ရှုခဲ့သည့်စာမျက်နှာများကိုခြေရာခံရန်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုနှင့်ကိုယ်ပိုင်ကုမ္ပဏီ Ezoic မှအသုံးပြုသည်။ 1440 မိ
.ရာဝတီ စာရင်းအင်း သင်၏အတွေ့အကြုံကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ရန်အတွက်အင်တာနက်ပေါ်ရှိကွဲပြားခြားနားသော ၀ က်ဘ်ဆိုက်များတွင်သင့်အားထူးခြားစွာခွဲခြားသတ်မှတ်ရန်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုနှင့်ကိုယ်ပိုင်ကုမ္ပဏီ Ezoic မှအသုံးပြုသည်။
_ga စာရင်းအင်း Google Analytics မှအသုံးပြုသူများကိုခွဲခြားရန်အသုံးပြုသည်
။ ဇော စာရင်းအင်း သင်၏အတွေ့အကြုံကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်ရန်နှင့်အကြောင်းအရာနှင့်ကိုက်ညီစေရန်အတွက်သင်၏ browser ၏ pixel အရွယ်အစားကိုသိုလှောင်ရန်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုနှင့်ကိုယ်ပိုင်ကုမ္ပဏီ Ezoic မှအသုံးပြုသည်။
နေပြည်တော် စာရင်းအင်း အသုံးပြုသူတစ် ဦး ကြည့်ရှုခဲ့သည့်စာမျက်နှာမည်မျှရှိသည်ကိုခြေရာခံရန်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုနှင့်ကိုယ်ပိုင်ပြုလုပ်သည့်ကုမ္ပဏီ Ezoic မှအသုံးပြုသည်။
ezCMPCCS စာရင်းအင်း အသုံးပြုသူတစ် ဦး သည်စာရင်းဇယား cookies များကိုခွင့်ပြုသည့်အခါခြေရာခံရန်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုနှင့်ကိုယ်ပိုင်ပြုလုပ်သည့်ကုမ္ပဏီ Ezoic မှအသုံးပြုသည်။
။ .ouspvh စာရင်းအင်း Ezoic မှခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုနှင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်ကုမ္ပဏီ၏နောက်ဆုံးလည်ပတ်မှုအပြီးအသုံးပြုသူတစ် ဦး လာရောက်ကြည့်ရှုသည့်စာမျက်နှာမည်မျှရှိသည်ကိုခြေရာခံရန်အသုံးပြုသည်။
_gid စာရင်းအင်း Google Analytics မှအသုံးပြုသူများကိုခွဲခြားရန်အသုံးပြုသည်
__utma စာရင်းအင်း အသုံးပြုသူ ၀ က်ဘ်ဆိုက်သို့အကြိမ်ပေါင်းများစွာဝင်ရောက်ခြင်းနှင့်ပထမဆုံးနှင့်လတ်တလောလာရောက်သည့်ရက်စွဲများအပေါ်ဒေတာများကိုစုဆောင်းသည်။ Google Analytics မှအသုံးပြုသည်။
AMP_ECID_EZOIC စာရင်းအင်း Accelerated Mobile Pages နှင့်ပတ်သက်သောကိန်းဂဏန်းများအတွက် Ezoic ကိုစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ထားသောနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုကုမ္ပဏီမှအသုံးပြုသည်
ez_recommended_pages စာရင်းအင်း အကြံပြုထားသောစာမျက်နှာဝစ်ဂျက်မှလာရောက်လည်ပတ်သူများကိုခြေရာခံရန်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုနှင့်ကိုယ်ပိုင်ကုမ္ပဏီ Ezoic မှအသုံးပြုသည်။
__utmd စာရင်းအင်း ၀ ဘ်ဆိုဒ်ပေါ်တွင်သင်၏လှုပ်ရှားမှုကိုခြေရာခံရန် Google Analytics မှအသုံးပြုသည်။
_gat စာရင်းအင်း Google Analytics မှအသုံးပြုသူများကိုခွဲခြားရန်အသုံးပြုသည်
__utmv စာရင်းအင်း ဂူဂဲလ် Analytics တွင် visit ည့်သည်အဆင့်စိတ်ကြိုက်ပြောင်းလဲနိုင်သောအချက်အလက်များကိုသိမ်းဆည်းသည်။
_sm_au စျေးကွက်ရှာဖွေရေး အသုံးပြုသူများကိုကြော်ငြာများပြန်လည်သတ်မှတ်ရန်ဂူဂဲလ်အမိန့်များကအသုံးပြုသည်။
__ အဘ စျေးကွက်ရှာဖွေရေး အသုံးပြုသူကိုပြသထားသောအဘယ်သို့ကြော်ငြာများကိုမှတ်ပုံတင်ရန်အသုံးပြုခဲ့သည်။
မင်္ဂလာပါ စျေးကွက်ရှာဖွေရေး အသက်အရွယ်နှင့်ကျားမကဲ့သို့သောလူ ဦး ရေဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များကိုသိုလှောင်ရန်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုနှင့်ကိုယ်ပိုင်ကုမ္ပဏီ Ezoic မှအသုံးပြုသည်။ 180 မိ
bfp_sn_rf_8b2087b102c9e3e5ffed1c1478ed8b78 စျေးကွက်ရှာဖွေရေး ၀ ဘ်ဆိုဒ်အများအပြားတွင်သင်၏ရှာဖွေခြင်းလုပ်ငန်းကိုခြေရာခံသည်။
bafp စျေးကွက်ရှာဖွေရေး ၀ ဘ်ဆိုဒ်အများအပြားတွင်သင်၏ရှာဖွေခြင်းလုပ်ငန်းကိုခြေရာခံသည်။
_ym_uid စျေးကွက်ရှာဖွေရေး အသုံးပြုသူများကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ရန်ကြော်ငြာကုမ္ပဏီ Yandex Metrica မှအသုံးပြုသည်။
cto_optout စျေးကွက်ရှာဖွေရေး သင်ကိုယ်ပိုင်စိတ်ကြိုက်ကြော်ငြာများကိုရွေးချယ်ပါကမှတ်တမ်းတင်ရန်ကြော်ငြာကွန်ယက် Criteo မှအသုံးပြုသည်။
bafp_ce စျေးကွက်ရှာဖွေရေး ၀ ဘ်ဆိုဒ်အများအပြားတွင်သင်၏ရှာဖွေခြင်းလုပ်ငန်းကိုခြေရာခံသည်။
bafp_eg စျေးကွက်ရှာဖွေရေး ၀ ဘ်ဆိုဒ်အများအပြားတွင်သင်၏ရှာဖွေခြင်းလုပ်ငန်းကိုခြေရာခံသည်။
DigiTrust.v1.identity စျေးကွက်ရှာဖွေရေး အွန်လိုင်းစျေးကွက်များကအသုံးပြုသူများကိုတစ် ဦး ချင်းစီကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ရန်။
OX_plg စျေးကွက်ရှာဖွေရေး ၀ ဘ်ဆိုဒ်မျိုးစုံတွင်အသုံးပြုသူကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ရန်ကြော်ငြာကွန်ယက် OpenX မှအသုံးပြုသည်
နိုင်ငံ၊ ပြည်နယ်၊ မြို့၊ မက်ထရိုနှင့်စာတိုက်သင်္ကေတများအပါအဝင်သင်၏တည်နေရာသတင်းအချက်အလက်
ဒီ site ရှိမည်သည့်စာမျက်နှာများကိုသင်လည်ပတ်သနည်း
သင်အချိန်ဘယ်လောက်ပေးသလဲ၊ မောက်စ်လှုပ်ရှားမှုအပါအ ၀ င်ဤ ၀ က်ဘ်ဆိုက်နှင့်သင်မည်သို့ဆက်ဆံသည်
သင်သည်ဤ website တွင်အကြောင်းအရာကူးယူကူးယူလျှင်
သင်အသုံးပြုသောအင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုအမျိုးအစားနှင့်သင်၏ ISP သို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုပေးသူ
ဤ ၀ ဘ်ဆိုဒ်၏ပါဝင်မှုသည်သင်၏ဘရောက်ဇာသို့ပြောင်းရန်၊ သင်၏ဘရောက်ဇာကိုဖွင့်ရန်နှင့်ပြန်တင်ရန်အချိန်မည်မျှကြာသည်
သင့်ရဲ့ ip address ကို
ဤ ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်အသုံးပြုနိုင်သောရောင်းချသူများစာရင်း
Sourcepoint Technologies က, Inc (CMP မဟုတ်သော)
Ringier Axel Springer Polska sp ။ z oo
BYTEEDANCE PTE ။ LTD ။
Opti ဒီဂျစ်တယ် SAS
လိမ္မာပါးနပ်သော Advertising, Lda ။
Sportradar AG က
Grabit Interactive Media Inc သည် dba KERV Interctive
တောင်စောင်း (အားကစား) GP လီမိတက်
Eye OOD Stream
ကာဗွန် (AI) လီမိတက်
McCann စည်းကမ်း, LTD
Cloud Technologies က SA
VRTCAL စျေးကွက်များ Inc
Reppublika- အဆိုပါသုတေသန Toolbox GmbH
retailAds GmbH & Co KG
Media.net ကြော်ငြာ FZ-LLC ကြော်ငြာ
AG က respondi
Adloox လုပ် SA
ကြွယ်ဝသောပရိသတ်များ Technologies က SL
Jetpack ဒီဂျစ်တယ် LLC
FAMBte dba ZAM ကွန်ယက် LLC
Appier PTE, Ltd
Strossle အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ AB
ADman Interactive မှ SLU
usemax ကြော်ငြာ (Emego GmbH)
Hindsight Technology Solutions, Inc
adrule မိုဘိုင်း GmbH
Onnetwork Sp ။ z oo
Eyeota Pte, Ltd
Signal ဒီဂျစ်တယ် Inc.
Liftoff မိုဘိုင်း, Inc
Fiducia DLT လီမိတက်
Captify Technologies ကလီမိတက်
Snapsort Inc ကို, Sortable အဖြစ် operating
Impact GmbH ကိုဆက်သွယ်ပါ
QuantumCast ဒီဂျစ်တယ် GmbH
Nano Interactive မှ GmbH
Bucksense Inc မှ
Admixer အီးယူ GmbH
ucfunnel Co. , Ltd.
ဒစ်ဂျစ်တယ် BV တိုးတက်အောင်လုပ်ပါ
EMX ဒစ်ဂျစ်တယ် LLC
NC ပရိတ်သတ်လဲလှယ်ခြင်း, LLC (NewsIQ)
EDGE NPD SP ။ z oo
CentralNic ပိုလန် sp ။ z oo
Proxi.cloud sp တိရစ္ဆာန်ရုံ
Adevinta စပိန် SLU
သတင်းခန်း AI လီမိတက်
အွန်လိုင်းကြော်ငြာကွန်ယက် Sp ။ z oo
Accorp Sp ။ z oo
SPORTORITY ယူကေ, LTD
အစွန်းရောက် Reach, Inc
CMI Marketing, Inc, / ခ /aCafeMedia
Funke ဒစ်ဂျစ်တယ် GmbH
Verizon Media EMEA လီမိတက်
Sub2 Technologies က, Ltd
Remixd မီဒီယာ, Inc
Spolecznosci SP ။ z oo Sp ။ ။ ။
PaperG, Inc dba Thunder စက်မှုလုပ်ငန်း
Arrivalist Co. ,
ID5 နည်းပညာ SAS
MindTake သုတေသန GmbH
eBay ကို Inc မှ
1020, Inc dba Placecast နှင့် Ericsson Emodo
Viewdeos 2015, LTD
adbility မီဒီယာ GmbH
အိုင်ပီ Deutschland GmbH
Ve Global UK လီမိတက်
Silverbullet ဒေတာန်ဆောင်မှုများ Group မှ
Resolution မီဒီယာMünchen GmbH
ANINPRO- ဖန်တီးမှု, SL
Wanted Group ကိုအပြုံး
Adverticum cPlc ။
Rubicon Project, Inc
InsurAds Technologies က SA ။
အလျင်ကောင်းသော LLC ဖန်ဆင်းတော်မူ၏
Effiliation / ထိရောက်မှု
Pte Ltd အနီး
Procter & Gamble ကုမ္ပဏီ
Lifesight Pte ။ Ltd.
RDandX Group မှ DMCC
မဟာမိတ်အဖွဲ့ Gravity ဒေတာမီဒီယာ
SublimeSkinz - အသိပညာ
အပြာရောင် Billywig BV
CommunicationAds GmbH & Co KG
အရောင်းကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည့် SL ကိုခန့်အပ်ပါ
Tech Limited ကိုနှိပ်ပါ
Cake Software, Inc
INIS sp ။ zo.o.
Upwave Inc ကို
Next ကိုမီဒီယာ SRL
BILENDI လုပ် SA
Duration, မီဒီယာ, LLC ။
Relay42 နယ်သာလန် BV
Sovrn Holdings က Inc
Little က Big ဒေတာ sp ။ z oo
smartclip ဥရောပ GmbH
Goldbach Group မှ AG
မီဒီယာ, Inc Sift
Adobe က Advertising ကြော်ငြာတိမ်တိုက်
TAPTAP ဒီဂျစ်တယ် SL
ဆွီဒင် AB ရှိမီဒီယာ၏သုတေသနနှင့်သုံးသပ်မှု
Adzymic Pte, Ltd
Snapupp Technologies က SL
Deutsche Post ကို AG က
ADMAN - Phaistos ကွန်ယက်များ၊
ယူလာပါ Labs AG
socoto gmbh & တွဲဖက်။ ကီလိုဂရမ်
မိုဘိုင်း Inc ကိုထုတ်ဖေါ်
ပြိုင်ဘက်ကင်းသော Solutions Limited
Simplifi Holdings မှ Inc
LinkedIn အိုင်ယာလန် Unlimited ကုမ္ပဏီ
ရည်ရွယ်ချက် Partners BV
Glimpse Protocol လီမိတက်
GDMServices, Incd/ ခ / တစ် FiksuDSP
RMSi ရေဒီယိုစျေးကွက်ရှာဖွေရေးဝန်ဆောင်မှု interactive GmbH
Onesoon လီမိတက် t / တစ် Adalyser
Listonic Sp ။ z oo
Dailymotion လုပ် SA
Oracle ကဒေတာများတိမ်တိုက် - ကျုံး
Lucid Holdings က, LLC
Verve Group မှ Europe GmbH
Dentsu Aegis ကွန်ယက် Italia SpA
eMarketingSolutions, အွန်လိုင်းစျေးကွက်ရှာဖွေရေး SL
Rapid စွမ်းဆောင်ရည် GmbH
GeistM Technologies က, LTD
42 ကြော်ငြာ GmbH
360e-com SP ။ z oo
MEDIA GMBH ကိုသတ်မှတ်ပါ
Discover-Tech မှ ltd
Axel Springer Teaser ကြော်ငြာ GmbH
Playbuzz လီမိတက် (EX.CO ခေါ်)
အသံအကြောင်းအရာ & ထိန်းချုပ်မှု GmbH
Permutive Technologies က, Inc
Unilever Polska sp ။ z oo
M32 Connect ကို Inc
SRL ကို Viralize
Neodata Group မှ srl
Adobe Audience Manager၊ Adobe အတွေ့အကြုံပလက်ဖောင်း
NEORY GmbH သည်
Rockabox မီဒီယာလီမိတက် t / တစ် Scoota
Beachfront မီဒီယာ LLC
တစ်ခုမှာ Tech Group မှ GmbH
Ziff Davis က LLC
ဦး ဆောင်မဟာမိတ် GmbH
Targetspot ဘယ်လ်ဂျီယံ SPRL
Unruly Group မှလီမိတက်
S4M အားဖြင့် Fusio
ADYOULIKE လုပ် SA
စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေး SLU Rebold
RTB အိမ်လုပ် SA
integral ကြော်ငြာသိပ္ပံ, Inc
bam! အပြန်အလှန်စျေးကွက်ရှာဖွေရေး GmbH
Semasio GmbH သည်
SFBX မှ XChange
Unruly Group မှ LLC
အော့တို (GmbH & Co KG)
အပိုဆောင်းနည်းပညာများ AG က
တည်နေရာသိပ္ပံ AI လီမိတက်
Google Advertising ထုတ်ကုန်များ
Mediasmart မိုဘိုင်း SL
cynapsis အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်ရေး GmbH
Adelaide မက်ထရစ် Inc မှ
Justtag Sp ။ z oo
Sparklit ကွန်ယက်များ Inc
Connatix Native Exchange Inc
Go.pl sp ။ z oo
Clinch Labs, LTD မှ
Comcast အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပြင်သစ် SAS
ပိုကောင်းတဲ့နဖူးစည်းစာတမ်း A / S
TX Group မှ AG
INVIDI နည်းပညာများ AB
WAM Group မှလီမိတက်၊
Exponential Interactive မှ, Incd/ ခ /aVDX.tv
Data များကို Offline ရင်းမြစ်များနှင့်လိုက်ဖက်ခြင်း
လိုအပ်သောကွတ်ကီးများကစာမျက်နှာရှာဖွေခြင်းနှင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်၏လုံခြုံသောနေရာများသို့ဝင်ရောက်ခြင်းစသည့်အခြေခံလုပ်ဆောင်မှုများကိုဖွင့်ခြင်းအားဖြင့် website ကိုအသုံးဝင်စေသည်။ ဤကွတ်ကီးများမပါဘဲ ၀ ဘ်ဆိုဒ်သည်စနစ်တကျလည်ပတ်။ မရပါ။
သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောဘာသာစကား (သို့) သင်ရှိနေသောဒေသများကဲ့သို့ဝက်ဘ်ဆိုက်၏ပြုမူပုံသို့မဟုတ်ပြောင်းလဲမှုကိုပြောင်းလဲစေသောသတင်းအချက်အလက်များကို Preference cookie များက ၀ ဘ်ဆိုဒ်အားမှတ်မိစေသည်။
စာရင်းအင်းကွတ်ကီးများသည် ၀ က်ဘ်ဆိုက်ပိုင်ရှင်များအားသတင်းအချက်အလက်များကိုစုဆောင်းခြင်းနှင့်အစီရင်ခံခြင်းအားဖြင့် visitors ည့်သည်များသည် ၀ က်ဘ်ဆိုက်များနှင့်မည်သို့ဆက်ဆံသည်ကိုနားလည်ရန်ကူညီသည်။
စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကွတ်ကီးများကိုဝက်ဘ်ဆိုက်များမှလူများအားခြေရာခံရန်အသုံးပြုသည် ရည်ရွယ်ချက်မှာအသုံးပြုသူတစ် ဦး ချင်းနှင့်သက်ဆိုင်ပြီးစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောကြော်ငြာများကိုပြသရန်ဖြစ်ပြီးကြေငြာသူများနှင့်တတိယပါတီကြော်ငြာသူများအတွက်ပိုမိုအကျိုးရှိသည်။
ဤသီးသန့်တည်ရှိမှုပေါ်လစီနှင့် ပတ်သက်၍ မေးခွန်းများရှိပါကသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့ ၀ က်ဘ်ဆိုက်နှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပယ်ဖျက်လိုပါကအောက်ပါအချက်အလက်များကို အသုံးပြု၍ သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့ထံစာရေးခြင်းဖြင့် -
ဘန်ဂလို, Karnataka 560103
အသုံးပြုသူ၏သတင်းအချက်အလက်များကိုသိရှိရန်တောင်းဆိုမှုများ၏အကျဉ်းချုပ်ကိုသင်ကြည့်လိုပါက၊ ဤစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလက်ခံရရှိထားသော CCPA လိုက်နာမှုကိုငြင်းပယ်ရန်အသုံးပြုသူအချက်အလက်များကိုပယ်ဖျက်ရန်တောင်းဆိုမှုများနှင့် - https://g.ezoic.net/privacy/tutorialcup.com/annualRequestSummary tutorialcup.com နှင့်ပတ်သက်